လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီးတွင် လူငယ် ​လေး ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီး - Myanmar Pressphoto Agency
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းတံတားနားအနီး အင်းစိန်လမ်းမပေါ်တွင် လူငယ် ​လေးဦး ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ရဲနှင့် စစ်သားများက သြဂုတ် ၄ ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်က အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်း MPA သတင်းထောက် ၏ မျက်မြင်တွေ့ရှိချက် အရသိရသည်။
Photo – MPA(လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီးတွင် လူငယ် ​လေး ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီး)
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ရဲတပ်ဖွဲ့များက4wheels နှင့် တစ်စီး၊ စစ်ကား တစ်စီးဖြင့် လူငယ် ​လေးဦးအား အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းခေါ်သွားပြီး အင်းစိန်လမ်းမကြီးအတိုင်း လှိုင်မြို့နယ်ဘက်သို့ မောင်းထွက်သွားကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အနော်ရထာလမ်းပေါ်တွင် လူငယ်များက စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေးအတွက် သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြရန် ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ ရဲများ စစ်သားများက အရပ်၀တ်ဖြင့် ကြိုတင် နေရာယူထားသည့် အတွက်ကြောင့် သပိတ်လမ်းကြောင်းထွက်မည့် အစီအစဉ်ကိုရွှေ့လိုက်ရကြောင်း သပိတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကဆိုသည်။
Photo – MPA ( ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်တွင် အရပ်၀တ်ဖြင့်စောင့်နေသည့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ )
ယင်းနောက် သပိတ်စစ်ကြောင်းကို ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် နေရာရွှေ့ခဲ့သော်လည်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ရဲနှင့်စစ်သားများက ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်း နေသည့်အတွက် ထပ်မံဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေသည့် သပိတ်စစ်ကြောင်းများကို လူအင်အားသုံးကာ အရပ်ဝတ်များဖြင့် ကြိုတင်စောင့်နေခြင်း၊ စစ်ကားများဖြင့်စီတန်းလှည့်လည်နေခြင်း၊​ အိမ်သုံးကားများဖြင့် ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းများကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ခပ်စိပ်စိပ် ပြုလုပ်လာကြောင်းတွေ့ရသည်။​
#လူငယ်၄ဦး #ဖမ်းဆီး #စကစ #သပိတ် #MPA
Terrorist SAC Arrests Four Young People for No Reason near Yangon’s Hledan Bus Stop
For no reason at all, the SAC’s military and police arrested four young people on Insein road, near the Hledan Overhead bridge in Kamayut township at about 3:45pm on August 4, according to one MPA reporter who eye-witnessed the incident.
After the arrest, the terrorist military and police took the four ona4 wheeler andamilitary truck and drove away towards Hlaing township on Insein road.
This afternoon, there wasaplan by young people to hold an anti-military dictatorship protest in Yangon’s Pabedan township, butastrike leader said that it had to be postponed after SAC’s soldiers and police had occupied the location and planned strike route in casual dresses.
After that, the strike was re-planned to be held in Kamayut, but it had to be cancelled again as the terrorist SAC’s military and police were already waiting ahead at the locations.
During these days in Yangon and Mandalay cities, anti-military dictatorship protests are being barred by the terrorist SAC by means of occupying the intended locations withalot of them in casual dresses, patrolling on military trucks and blocking with family cars.
#FourYoungPeople #Arrest #SAC #Strike #MPA
Tags: Arrest MPA Myanmar News Politics protest Youths
Previous: ရွာသာကြီး စက်မှုဇုန် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား ရွှေလှေမုန့်စက်ရုံ အပါအဝင် စက်ရုံ သုံးခုမီးလောင်
Next: စစ်ကောင်စီကို ထောက်ခံသည့် ၂၈ ပါတီကို ပြည်သူ့ဘုံရန်သူများဟု သတ်မှတ်